नेपालका लागि जयशंकर भन्दा लीको भ्रमण महत्त्वपूर्ण : एक महिनाभित्रै राष्ट्रपति शी पनि आउने ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more नेपालका लागि जयशंकर भन्दा लीको भ्रमण महत्त्वपूर्ण : एक महिनाभित्रै राष्ट्रपति शी पनि आउने !
नेपालका लागि जयशंकर भन्दा लीको भ्रमण महत्त्वपूर्ण : एक महिनाभित्रै राष्ट्रपति शी पनि आउने !
भदौ २३ गते, २०७६ - ०९:१६
काठमाडौं । आइतवार साँझ पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादबाट चार्टर फ्लाइटमा सोझै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी ४८ घन्टाका लागि नेपाल भ्रमणमा आए ।
यीको नेपाल भ्रमणलाई राष्ट्रपति शी जिनफिङको सम्भावित नेपाल भ्रमणसँग जोडेर हेरिएको छ । राष्ट्रपति शी यही अक्टुबरमा नेपाल आउन सक्ने बताइएको छ, यद्यपि यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन ।
यसअघि गत भदौ ४ गते भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आएका थिए । नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन आएका जयशंकर दुई दिन नेपाल बसेका थिए ।
जयशंकरलाई भन्दा बढी महत्त्व लीलाई !
१८ दिनको फरकमा दुई ठूला छिमेकी देशका विदेशमन्त्री नेपाल आउनु नेपालका लागि नितान्त नौलो राजनीतिक परिघटना हो । यद्यपि जयशंकर नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन आएका थिए भने ली राष्ट्रपति शीको सम्भावित नेपाल भ्रमणका तयारीका लागि आएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नेपालले जयशंकरको नेपाल भ्रमणलाई भन्दा लीको भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरेको छ । जयशंकरलाई स्वागत गर्न परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी विमानस्थल पुगेका थिए भने लीको स्वागतमा विमानस्थलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादव पुगेका थिए । कूटनीतिक अर्थमा मन्त्रीस्तरबाट भएको स्वागत बढी महत्त्वको देखिन्छ ।
राष्ट्रपति शीको भ्रमण तयारी तीव्र गतिमा
एक दिन अघिमात्र भ्रमण तालिका सार्वजनिक भएको भएपनि लीको भ्रमण तयारी १५ दिनदेखि चलिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ली भन्दा पहिला चिनियाँ सुरक्षा टोली गोप्य रूपमा नेपाल आएको थियो । ‘त्यो सुरक्षा टोली राष्ट्रपति शीको भ्रमणसम्म रहनेछ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सुरक्षाका कारण राष्ट्रपति शीको भ्रमणका विषयमा अहिल्यै केही जानकारी आइसको छैन । तर हामी चिनियाँ सुरक्षा टोलीसँग निरन्तर परामर्शमा छौं ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयका ति अधिकारीको भनाइमा विश्वास गर्ने हो भने राष्ट्रपति शीको भ्रमण छिट्टै हुने देखिन्छ । तर कहिले हुन्छ भन्ने हालसम्म यकीन हुन सकेको छैन । यसअघि पटक(पटक ‘उपयुक्त समय’को भाका दिँदै आएका राष्ट्रपति शीले नेपाल भ्रमण गर्ने उपयुक्त समय अहिले नै भएको चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्की बताउँछन् ।
‘यदि नेपाल भ्रमण गर्ने हो भने उपयुक्त समय यही हो,’ कार्कीले भने, ‘यसका लागि तयारी भने दुवै तर्फबाट राम्रो हुन जरुरी छ । चिनियाँ तर्फबाट लामो समयसम्म राष्ट्रपति स्तरको भ्रमण नेपालमा भएको छैन । अहिले स्थायी सरकार छ, एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्ध सरकार छ । नेपाली जनताले चीनलाई आफ्नो भरोसाको केन्द्र मानेका छन् । यसकारण चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’
भारतीय संचारमाध्यमहरूले राष्ट्रपति शी यही अक्टोबरमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अनौपचारिक वार्ताका लागि दक्षिण भारत जाने कार्यक्रम रहेको बताएका छन् । सोही समयमा नेपाल आउने शीको कार्यक्रम रहेको हुनसक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ । विदेशमन्त्री यीले काठमाडौँमा राष्ट्रपति शीको भ्रमणको तयारी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रचण्डलाई भेट्नेछन् यीले
चिनियाँ विदेशमात्री यीले मंगलवार नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत अन्य उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नेपाल ओर्लेपछि आइतवार यीको कुनै पनि भेटवार्ता तय भएको थिएन । सोमवारदेखि मात्र यी आफ्नो काममा सक्रिय हुनेछन् ।
१९ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आएका विदेशमन्त्री यीले सोमवार दिउँसो साढे तीन बजे परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय वार्तामा सरिक हुनेछन् । दुवै देशका समकक्षीबीच केही समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ । वार्तामा पुराना सम्झौता कार्यान्वयनको समीक्षा र पुनरावलोकन पनि हुने बताइएको छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले सोमबार साँझ पाँच बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसलगत्तै विदेशमन्त्री वाङको टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शितल निवासमा शिष्टाचार भेट गर्नेछ ।
यस्तै मंगलबार बिहान वाङको टोलीले प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ । मंगलबार अपरान्ह तीन बजे चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
यसअघि प्रचण्डले नेपालको २ दिने भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसँग भेट्न अस्वीकार गरेका थिए । जयशंकर बसेको होटेल द्वारिकाजमा प्रचण्डलाई भेटको निम्तो आएको तर प्रचण्डले पार्टीको काम देखाएर भेट्न अस्वीकार गरेको प्रचण्डनिकट स्रोतले बताएको थियो ।
भदौ २३ गते, २०७६ - ०९:१६ मा प्रकाशित